Canshuuraha Laga Qaado Ganacsatada Gobolka Banaadir oo Dib Loo Siiyo Ganacsato Kale Si Aan Xalaal Ahayn – Balcad.com Teyteyleey
Canshuuraha Laga Qaado Ganacsatada Gobolka Banaadir oo Dib Loo Siiyo Ganacsato Kale Si Aan Xalaal Ahayn
Waa caddaalad darro in lacagta canshuurta ah ee aan bixino ay dawladdu ku bixiso wadda aan sax ahayn. In loo isticmaalo hawlaha muhiimka ah sida mushaaraadka ciidamada iyo wixii la mid ah ayaa loo baahanyahay, laakiin waxaan hadda arkaynaa in wasaaradda maaliyadu u qoondaysay qayb canshuurta ka mid ah koox ganacsato ah oo hormuud ka yahay Gabayre.
Arrintaanna cayb ayey ku tahay wasaarada maaliyada waxayna durbadiiba abuurtay in laga shakiyo ballan qaadkii wasaaradda ee ahaa maamul wanaag, sidaas waxaa sheegay ganacsato canshuur bixiyayaal ah oo halkaan ku lifaaqan.
Lacagtaan ayaa ah 0.50% dakhliga canshuureed ka dawladda, si kale haddii loo dhigo waxay gaaraysaa lacagtaasi mushaarka 400 ilaa 450 askari bilkasta, waana mid sii badan karta mar kasta oo canshuurta dawladdu sii cororto.
Su’aasha lays waydiinaayo ayaa ah ma shaqaalaha dawladda ayaa lacagta loo doonaayaa mase dad ganacsato ah.
Ma jirto sabab loo siiyo lacagta canshuurta ah oo lawada ogyahay baahida ay dawladu u qabi karto in la siiyo koox amaba lagu bixiyo meel ka duwan halkii loogu talagalay. Ugu dambayntiina waxay Ganacasatu sheegeen inay farriintaan gaarsiin doonaan R/wasaaraha iyo Madaxwaynaha DFS.
Akhriso warqaddaha kala duwan ee iska hor imaadka ka muuqdo kana soo baxay xaafiisyada kala Duwan Ee Dowlada oo uu ka mid yahay wasaaradda maaliyaddu.
Arrintaani waxay shaki galinaysaa ballanqaadkii dawladda cusub ee ahaa inay cirib jarayaan musuq iyo si xun wax u maamulida oo dhan ayna dakhliga dawladda ku bixin doonta halka ugu haboon.
The post Canshuuraha Laga Qaado Ganacsatada Gobolka Banaadir oo Dib Loo Siiyo Ganacsato Kale Si Aan Xalaal Ahayn appeared first on Ilwareed Online.
Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab ku dagaalamay duleedka degmada Balcad